by UJoann Schneider Farris
Umzobo wokukrazula unokwenzeka kwiMhlaba omile
Iimpawu ze-Snow white zezantsi ze-skate ziyi-skater yomdwebo obalaseleyo okanye umntu othanda ukwenza into eyenziwa kwiqhwa kwiikhephe ezisezantsi. Imveliso yenziwa ngu-Arthur Lee we-Double International s. Inkampani isekelwe eTaiwan. Injongo yenkampani kukukhuthaza ukukhwela kwe-artistic .
Abo bazama i-Snow Whites bathi banako ukwenza i- spins kunye nokuzula ngokulula. Kwakhona, zikhanya kakhulu kwaye iifom efutshane yenza kube lula ukwenza iingoma ze-ice.
Ukucwina kungonwaba kwi-Snow Whites, kodwa kungathatha ixesha ukufumanisa apho "indawo emnandi". Xa i-skater izama ukuhlala i-spin , kunokufuneka iphoqe ubunzima bakhe ngokukhawuleza. I-Camel spins ivakalelwa kakhulu ngathi i-camel spins ivakalelwa kwiqhwa.
Nangona iinqwelo ze-Snow White zenziwe e-China, kukho i-Snow White skate distributors kuwo wonke umhlaba. Amanye amazwe apho iikhanku ze-Snow White zifumaneka ukuthenga ziquka i-Argentina, i-Australia, i-Austria, iBelelux, iBrazil, iChina, i-Czech neSlovakia, iFransi, i-Georgia, i-Jamani, i-Hong Kong, i-India, iIran, iItali, iJapan, iMalaysia, i-Poland, iPortugal, ERomania, eRussia, eSingapore, eSpeyin, eSwitzerland, eTaiwan, e-Ukraine, e-United Kingdom nase-USA.
Abo banomdla kwi-artistic inline skating skating baya kufumanisa ukuba i-Snow White i-skate skates skates iyona ethandwa kakhulu kwaye yenye yezona zikhethi ezigciniweyo ezigciniweyo ezisemgangathweni kwi -world roller skating skating .
Iivili ezintathu, ukuma kweetonki, kunye ne-rockered design yenza i-skate elula ngaphezu kwe -PIC® Skate eyona nto ibonakalayo ebonakalayo eqingqiweyo kwi-skating skaters.
Isiqulatho esibonakalayo se-Snow White senza ukuba sikwazi ukwenza i-spins kwaye iqhube kalula.
Imidaniso ye-Ice, ijika, amanyathelo, kunye nomsebenzi onyawo zingenziwa ngokuchanekileyo ngenxa yesakhelo esifutshane.
Utshintsho oluvela kwimveli yamakhredithi e-ice ukuya kwi-Snow White eqhotyoshelweyo iikhredithi zemifanekiso zingathatha ixesha.
I-skaters ayinakukwazi ukufumana isantya esininzi kwezi zikhuphe njengoko zikwazi ukufikelela kwiqhwa.
Ivakalelwa njenge-skate skate.
I-skaters iyakuthengisa isakhelo esilungisiweyo kwaye uyifake kwisitya okanye isitsha sebhoti.
I-skate ye-Snow White inemiphetho yangaphakathi nangaphandle ngaphandle kwe-skate skate.
Ngokuziqhelanisa, iipinki zenzeke kwiikhwele ze-Snow White.
Zonke i-jump, ezibandakanya izibini eziphindwe kabini kunye nezihlandlo ezintathu zokukhwabanisa ziyakwenzeka kwiikhwele ze-Snow White.
Ngokuziqhelanisa, zonke iindlela ezenziwa kwiqhwa nazo zinokuthi zenziwe kwiikhwele ze-Snow White.
Isakhelo se-Snow White senzelwe i-skating yangaphakathi, kodwa umenzi wenza kwakhona iivili ezifumanekayo zokukhwela ngaphandle.
I-skate ye-Snow White iyona nto ikhethiweyo ye-skate skate kwi- roller-skating world skating world.
Izitifiketi ze-Snow White zenza ukuba kube lula ukwenza zonke iimpawu zokukhwela ezenziwe kwiqhwa kwiqhwa. I-design ye-skate yokukhanyisa, i-toe stop, kunye ne-frame-rockered ifowuni inceda umgca we-skater uzive ngathi u-skate kwi-skate skates.
Ezi ziNtsha zeeGolon ezintsha kwi-Pro Shops ngoku
Indlela yokukhetha iRucket yeTennis ephezulu yokuLawula kunye neMandla
Ukuhlaziywa: i-TaylorMade yeTrons ekhethiweyo
Kuphi ukuthenga iVintage Ski Clothing Clothing
Yiyiphi iDwala yokuKhusela iWebber Rubber yiStickiest?
Ukuhlaziywa komqhubi we-KZG Gemini
I-Callaway FT-i Umqhubi: Xa kwakuyi-Hip ukuba ibe yi-Square
Ukuvuthwa Kwokuqala KwamaKlabhu eGalofu Ukwaziswa okuManyeneyo
Ukubeka Ubude: Yintoni efanelekileyo kuwe?
Imfazwe Yehlabathi II: USS Hancock (CV-19)
Izinto ezibalulekileyo zokusasazwa kweMbewu
Ziziphi Iingoma Ndifanele Ndizibethe eYule?
Ukuhlaziywa kweMelon Bike Helmet
I-Aquarius Moon (iTransit) - I-Mood ne-Happenings
Yintoni i-Economic Mathematical?
Indlela yokudibanisa "i-Grossir" (ukufumana isisindo, kuba yi-Fat)
Inyanga yeMbali Yomnyama - i-African American Inventors
Ziziphi abaFundi, Abazali kunye nabaPhezulu abakulindele ngokwenene ootitshala
Ukukhulisa i-Own Multicolor yakho yeeMeralal Specimen
Iifutha Zomlilo Ezikhanyayo
Ukuphonononga: I-Continental ExtremeContact DWS
Iikontrakthi zokulandelela ukuziphatha, iiNgxelo zeNkcazo, kunye neesebenzi
Oko Siyamazi Ngenkemba KaLabhan
Indlela yokubulala iiNtshontsha: Yintoni eSebenzayo kwaye Akunjani
Intsingiselo ye "st" okanye "Isihloko" kwi-Equations Equation